ဘုန်းကျော်: လက်တို့ပြီးတော့ပြောရအုံးမယ်...ဗမာလား..? အထာလား..?
ကျနော်အနေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲ အကောင်းမမြင်တာလား။ ကျနော့်ကို...သူများတွေပြောတယ် မင်းက Negative Sense တွေပဲများတယ်။ လူတွေအပေါ်မှ ကြည့်တဲ့အခါကို ပြောတာပါ။ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတခု၊ မြန်မာ့စစ်အာရှင်ခွေးကျဝက်ကျဖြစ်ရေးတိုက်ပွဲတခု မှာ ကျနော်ကြည့်တဲ့အမြင်က အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည် သူတွေကိုပဲ အားမလို အားမရဖြစ်တာများတယ်။ တိုင်းပြည်တခု၊ အဖွဲ့အစည်းတခုဆိုတာ တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။
အခါပေါင်းများစွာ ဗမာပြည်ကိုဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ်။ ဖုန်းပေါ်ကနေ အသိတွေကိုနိုင်ငံရေးတရားဟောတယ်။ သူတို့ ခင်ဗျား လုပ်တောင်မလုပ်ကသေးဘူး သူများပြောတာကိုတောင် နားထောင်မရဲဘူး။ ဘာ့ကြာင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကို ဖမ်းမှာဆိုလို့၊ အလုပ်ပြုတ်မှာဆိုးလို့ ဆင်ခြေတွေ၊ လက်တွေကို ကျောပိုးအိပ်ထဲမှာ အကြီးကြီး ထမ်းထားကြတယ်။
ပြည်ပမှာလဲဒီအတိုင်းပဲ။ လူကြီးမင်းတို့.........နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု့တွေမှာ ၀င်ပါမလားလို့ဖိတ်တဲ့အခါများ မြန်မာပြည်, မပြန်ရမှာဆိုးလို့..။ မြန်မာပြည်က အမိ၊အဖ ဆွေမျိုးတွေ အဖမ်းခံရမှာဆိုးလို့။ စီးပွားရေးထိခိုက်မှာ စိုးလို့ အကြောင်းပြချက်တွေက မနည်းဘူး။ သူတို့အားလုံးကိုမေးတော့ ခင်ဗျားတို့စစ်အစိုးရ ထောက်ခံတဲ့လူတွေ လားဆိုတော့။ တခုပဲပြောတယ်...နိုင်ငံရေးနဲ့မပက်ချင်လို့..။
ကဲ..အခုပြောမယ်။ အဖြူနဲ့အမည်း။ ထောက်ခံမလား၊ ကန့်ကွက်မလား။ ဒီနှစ်ခုပဲ...ကျနော်တို့တိုက်ပွဲအတွက် အရေးကြီးတယ်။ ထောက်ခံမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပါ။ ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင် ရင်..ကျနော်တို့ကို ပေါ်တင်, ချပါ။ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရအာဏာတည်မြဲအောင် အားပေးပါ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို, မလုပ်ကြပါနဲ့..။
ဥပမာ..စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ ခင်ဗျားလည်း ဒုက္ခသည်၊ ကျနော်လည်း ဒုက္ခသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာကို တိုင်းပြည်တခုလုံးခံနေရတယ်။ ဒါလည်းခင်ဗျားသိတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံရေးနဲ့  မပက်ချင်ဘူးဆိုတော့..။ ဒီလိုလုပ်ပါ...ခင်ဗျား, -င်, ကို ဗိုလ်ချုပ်တွေဝိုင်း-ိုး ပါလို့အော်တာနဲ့အတူတူပဲ။
နောင်....သုံးလေးနှစ်ကြာရင် ဒေါ်စုအာဏာရပြီး၊ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းလာ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်လာ၊ ဒီမိုကရေစီရေး အခွင့်အရေးတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားစောက်ပါးစပ် ဘာပြောမလဲ။ ခင်ဗျားလည်းပြည်သူ.ကျုပ်လည်း ပြည်သူ။ ဒီမိုကရေစီရေးထွန်းကားရင် ကျနော်တို့အားလုံး သာတူညီမျှအခွင့်အရေးခံစားရမှာ။ ခင်ဗျားလည်းအတူ တူပဲ။ အဲဒိအချိန်ကြာတော့ ခင်ဗျားက ရေသာခိုအချောင်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလား။
နိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကင်းနေမယ်လို့ ဘယ်တော့မှ ခင်ဗျားရဲ့ ထမင်းစားတဲ့ ပါးစပ်ကြီးက လာမပြောနဲ့။ အချောင်သမား စိတ်ဓာတ်မထားနဲ့။ ခင်ဗျားထားရင် ခင်ဗျားသားသမီးတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘိုးဘွားဘီဘင်ကစလို့ အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ရေးမှာ ကျဆုံး၊ ပျက်စီး၊ သွားတဲ့ ဘ၀တွေကို ခင်ဗျားမသနားရင် ခင်ဗျားဟာ ချီးစားပြီး ဟောင်တက်တဲ့ေ-ွးလောက်မှ အဆင့်မရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျနော်...ပြောတာကြမ်းလား...။ ရိုင်းလား။ ရိုင်းတယ်ထင်ရင်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူးဗျို့ ။ လူတွေရဲ့ အကျင့် ကိုပြင်တဲ့ အခါ ပါးစပ်, နဲ့ပြောလို့မရရင် လက်, နဲ့ ပါရတော့မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့  ကိုယ်ပိုင်ဘလောဂ် အီးမေးမှာတောင်စစ်စိုးရကို တော်လှန်ဖို့၊ ဆန့်ကျင်ဖို့ မရေးရဲရင် ခင်ဗျားလာက် သရဲဘောကြောင်တဲ့လူ မရှိတော့ဘူး။ ကဲ..ခင်ဗျား ကျနော်ပြောတာမခံချင်ဘူးလား။ ဒါဆိုရင်... ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုသိ။ သူများခိုင်းမှ လုပ်တာဟာ..မြန်မာစကားပုံနဲ့ဆိုရင် နွား ပဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, May 28, 2009